Worldwide မှ ၆၅ ခုရှိသည့် Virtual Offices
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်လွှဲပြောင်းခြင်း (အီလက်ထရောနစ်နှင့် / သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ခုလုံး)
တတ်နိုင် Virtual ရုံး မင်းရဲ့စီးပွားရေး virtual ရုံးလိပ်စာ, စီးပွားရေးအတွက် virtual address, သင့်ကိုယ်ပိုင် သင်၏အတွက် virtual ရုံးခန်း အွန်လိုင်းရုံးစုံလင်သည် virtual စီးပွားရေးလိပ်စာအားဖြင့် virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုပေး လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှပတ်လည်ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး.
သင်၏ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံတကာ - Virtual ရုံး
Million Makers မှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစီးပွားရေးလိပ်စာများဖြင့်သင်၏အောင်မြင်မှုကို ဦး တည်။ ကုန်ကျစရိတ်အလွန် နည်း၍ သင်၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။
သင်၏ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာက
Virtual ရုံး စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးကမ္ဘာရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာဟုလည်းလူသိများသည့် Virtual ရုံးခန်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားငှားရမ်းခြင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သို့မဟုတ်တည်နေရာအတွက်စျေးကြီးသောငှားရမ်းခကိုမပေးရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ Virtual Office သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင် virtual office သည်သမားရိုးကျရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်ငှားရမ်းခကိုမပေးဆောင်ဘဲဂုဏ်သိက္ခာကြီးမားသည့်စီးပွားရေးလိပ်စာကိုသင်ပေးဆောင်ကြသဖြင့် virtual office တစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြသည်။ Virtual ရုံးသည်သင့်အားစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုအနိမ့်ကျသက်သာစေနိုင်သည်။ Virtual ရုံးနေရာကိုယူခြင်းအားဖြင့်၊ virtual office အနေဖြင့်သင်၏ရုံးကိုပိုမိုကြီးမားသောရုံးခန်းသို့ပြောင်းစရာမလိုဘဲချဲ့ထွင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Virtual ရုံးသည်ရိုးရာရုံးများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးစီးပွားရေးတိုးချဲ့ရာတွင်တိုးတက်သည်။
သင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် virtual office လိပ်စာတစ်ခုရှိခြင်းသည်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာသင်၏ရုံးနေရာသို့မဟုတ်အလုပ်နေရာ၌သင်လက်ခံရရှိခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏ packets နှင့်စာတိုက်မေးလ်များကိုလက်ခံရရှိနိုင်သောကြောင့်သင်လက်ခံရရှိနိုင်ခြင်းသည်သင်၏ရုံးကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းမပြုဘဲအွန်လိုင်းနှင့်သင်၏လူအများအပြားတို့ဖြစ်သည်။ virtual office ကိုရွေးချယ်ပါ။ Virtual Office တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Virtual ရုံးသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုအလုပ်လုပ်ရန်စွမ်းရည်ကိုပေးသည်။
သင်၏ Virtual Office ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ
ရရှိထားသည့်ပစ္စည်း ၂၀ ကျော်အတွက်အခကြေးငွေမရှိပါ
စာအိတ် ၁၀ စောင်အတွက်အခကြေးငွေမရှိပါ
အကြောင်းအရာ3စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအတွက်အခကြေးငွေမယူပါ
ရက်ပေါင်း ၂၀ အထိအခမဲ့စာတိုက်သိုလှောင်မှု
Virtual Office ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စာကို Digitize လုပ်သည်
သင်၏ညွှန်ကြားချက်များအရ၊ သင်၏အီးမေးကို digitize လုပ်ပါမည်။ အပြည့်အဝဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုက်နာမှု။
အွန်လိုင်းသို့မဟုတ် App မှတဆင့်ရယူခြင်း & စီမံခြင်း
ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းပြီးသောအခါ၊ သင်သည်မည်သည့်အချိန်၊ ဘယ်နေရာ၊ မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအွန်လိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်အီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းကြားခံရသည်။
သင်၏တောင်းဆိုချက်အရသင်၏မေးလ်ကိုကမ္ဘာ့နေရာတိုင်းတွင်ပို့နိုင်သည်။ မည်သည့်သင်္ဘော ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင့်အားလွှဲအပ်သင့်သည်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သင်၏ Virtual Office ကိုရွေးချယ်ပါ
လူကြိုက်များ Virtual ရုံးတည်နေရာ
ရယူ အားလုံးမရှိမဖြစ်သာယာအဆင်ပြေမှုများ စျေးသက်သာစျေးနှုန်းမှာ
Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုသည်အောက်ဖော်ပြပါလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ virtual office ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
လက်နက်၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်၊ ကြေးစား (သို့) ကန်ထရိုက်စစ်သည်များထုတ်လုပ်သူများ၊ ရောင်းချသူများ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအား virtual office ၀ န်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးမထားပါ။
virtual ရုံးများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊
virtual address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်နိုင်ငံတကာဥပဒေများအရအနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှုအောက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများကိုမျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ဒီဂရီဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ် Workspace ဖြေရှင်းမှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သောတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း (s) ၏။
virtual po box ဝန်ဆောင်မှုများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များအားကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းကိုရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းပြုလုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
virtual mailing address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားမိဘများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်နယ်သာလန်နိုင်ငံမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်သောလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပုံစံများအပါအ ၀ င် Adoption အေဂျင်စီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရုံးခန်းနေရာငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက် virtual ရုံးများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ပိရမစ်ရောင်းချမှုတွင်ပါ ၀ င်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်အကောင်းဆုံး virtual address ၀ န်ဆောင်မှုများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးမထားပါ။
ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ယနေ့သင်၏ virtual office ကိုရယူပါ။
ကျနော်တို့စျေးသက်သာ ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများအဖြစ်ကိုလည်းသိ ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ, virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု, virtual ရုံးကုမ္ပဏီ, စာပို့ဝန်ဆောင်မှု, ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု, ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု, စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု, virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက်, ကို virtual po box ကိုဝန်ဆောင်မှု, ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု, virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု, ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု.
Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Virtual Office
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးအမည်နှစ်ခုလုံးအတွက် Virtual Office Address တွင်စာတိုက်နှင့်ပို့စာကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့သင်လုပ်နိုင်သည် - သင်၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်၊ Virtual ရုံး၏အကောင့်အကောင့် post-box settings တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးအမည်နှစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့မှသာစာတိုက်နှင့်စာတိုက်များကို Virtual Office Address ရှိအမည်နှစ်ခုလုံးအောက်တွင်လက်ခံရရှိနိုင်သည်။
ယနေ့သင်၏ Virtual ရုံးကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပါ။
ဖော်ပြခဲ့သောနေရာများအတွက် Virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုများသည်အမ်စတာဒမ်ရှိရုံးခန်းနေရာတွင်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထုပ်များကိုလက်ခံခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သောအလွန်ကျွမ်းကျင်သောလူစုအဖွဲ့မှစီမံခန့်ခွဲသောတကယ့်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာများဖြစ်သည်။
ယနေ့သင်၏ Virtual ရုံးလိပ်စာကိုရယူပါ။
Virtual Office လိပ်စာလက်ခံရရှိထားသောစာတိုက်နှင့်စာတိုက်ပုံးများကိုလိပ်စာအမြောက်အများသို့ပေးပို့နိုင်ပါသလား။
ယနေ့သင်၏ Virtual Address ကိုရယူပါ။
Virtual Office လိပ်စာသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်၏စာပို့လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
သင်၏စာ (သို့) အထုပ်တစ်ခုခုသည် virtual စီးပွားရေးလိပ်စာသို့ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းတို့ကိုဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲပြီး virtual mailbox မှတဆင့်သင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းနောက်သင်ရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ရန်၊ စကင်လုပ်ရန်၊ ပေးပို့ရန်သို့မဟုတ်စွန့်ရန်အကြောင်းကြားရန်အကြောင်းကြားသည်။
Virtual Business address သည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောက်ရှိရန်အလိုရှိသည်။ သင်၏တည်ရှိမှုအတွက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်အချိန်နှင့်ငွေအမြောက်အများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုဘဲသင်၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်ရန်သင်၏ဆန္ဒပေါ်မူတည်သည်။
Virtual PO Box သို့မဟုတ် virtual mailing address သို့မဟုတ် virtual office workspace အတွက်အပို ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်မည်သည့်အပိုနှင့်အပိုကုန်ကျငွေများရှိပါသလဲ။
မင်းမှာ virtual mailing address နဲ့ virtual PO box နဲ့ virtual office workspace တို့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာအရမ်းပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့မူဝါဒနဲ့လစဉ်ကြေးရှိတယ်၊ အဲဒါကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ virtual office လို့ခေါ်ပြီးသင်ရွေးချယ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်မူတည်သည်။ သင်သည်ပုံမှန်အထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောအပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
virtual office ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လူများနှင့်ဆက်စပ်နေသောအခြားအမည်များမှာ virtual office နှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများ၊ virtual office ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဒီဂျစ်တယ် Workspace ဖြေရှင်းချက်များ၊ virtual ရုံးလိပ်စာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ virtual office ဝန်ဆောင်မှုများ၊ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ virtual office service provider များ၊ Workspace မှ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ virtual mailbox ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ virtual mailing address service များ၊ ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ virtual mailbox ၀ န်ဆောင်မှုများ၊
Virtual Office ကိုမှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
တိုင်းပြည်တိုင်းသည်ရုံးသုံးလိပ်စာအဖြစ် virtual office ကိုအသုံးပြုရန်တင်းကြပ်သောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ရှင်းလင်းချက်များအတွက်ထိတွေ့ရယူပါ။
Virtual စာတိုက်လိပ်စာ Virtual Office Mailing Address စာပို့ခြင်း မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ Virtual Office အတွက်
အခမဲ့တိုင်ပင်တောင်းဆိုခြင်း Virtual Business Address အတွက်ဖြစ်သည်